mardi, 13 octobre 2020 10:00
Mangabe Sahananto: Nahazo Distrika katolika vaovao
Anisan’ny anton-dian’ny Delegasiona notarihin’ny Governora sy ny Solombavam-bahoaka tany Mangabe-Sahananto, ny nanatrika ny lanonan-dehibe fanokafana ny Distrika katolika any an-toerana. Tamin’ny taona 1938 tany no nanomboka nisy fiangonana taty Mangabe, izay niankina tamin’ny Distrikan’i Foulpointe nandritra fitopolo taona (1950-2020). Ny Alahady 11 Oktobra 2020 no nahazo Distrika i Mangabe, izay ivondronana Paroasy miisa 86, ka teo ambany fiahian’ny Kardinaly TSARAHAZANA Désiré Arsevekan’i Toamasina, izay notronin’ny pretra sy olom-piangonana ary olom-panjakana sy olom-boafidy maro. Marihina fa ankoatra ny fahasoavan’Andriamanitra azon’izy ireo, dia nanampy betsaka tamin’ny fanokafana ny làlana ny ezaka natao’ny kristianina katolika sy ny mponina taty an-toerana.
lundi, 12 octobre 2020 12:13
Jaojoby Eusèbe : Notolorana "Commandeur de l'Ordre National Malagasy"
Notolorana ny mari-boninahi-pirenena "Commandeur de l'Ordre National Malagasy" i Jaojoby Eusèbe. Mpivoy ny gadona salegy, ary nitondra izany hatrany ampitan-dranomasina i Jaojoby Eusèbe, ary ambara ho Mpanjakan'ny salegy mihitsy aza izy. Nandritra ny fankalazana ny faha-50 taona niakarany an-tsehatra, teny amin'ny Jao's Pub Ambohipo, omaly alahady 11 oktobra 2020, no nanaovana ny lanonam-panjakana nanolorana an’ity mari-boninahi-pirenena ity.
samedi, 10 octobre 2020 21:27
Ady amin’ny piraty: Kapila mangirana miisa 37 000 nodorana
Kapila mangirana piraty miisa 37 000 noraofin’ny Borigady misahana ny ady atao amin’ny hosoka sy ny piraty na ny BAP eo anivon'ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina ka nodorana androany teny Ambohitrimanjaka. Ho fampiharana ny didim-panjakana laharana 94 036 ao amin’ny andininy faha 149 no nirosoana tao anatin’izay fandorana ireto kapila mangirana hosoka ireto.
Raolisoa Clotilde na Clotilde araka ny ahafantaran’ny maro, indrindra ireo mpihaino tantara ao amin'ny Radio Nasionaly Malagasy (RNM). Nodimandry androany zoma 9 oktobra 2020, teo amin'ny faha 79 taonany izy. Fijanonan’ny fo tampoka no voalaza fa nitarika ny fahafatesan’i Clotilde. Ny taona 1962, fony mbola RTM (Radio Télévision Malagasy) teny Antaninarenina, no nidirany tao ho mpilalao tantara.Herinandro lasa izay, ny 2 Oktobra 2020, no nodimandry tany Frantsa teo amin’ny faha-98 taonany koa i Rasoanarimalana Jeanne izay namorona ilay fandaharana “Haody Rasoabakobako” tao amin’ny Radio Madagasikara.
Nampiantso mpanao gazety teny amin’ny tranombokim-pirenena ny teo anivon’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina tamin’ny alalan’ny Tale jeneralin'ny Serasera mpisolo-toerana sy ny tale jeneralin’ny kolontsaina, mahakasika ireo hira nasaina nesorina tamin’ny hainoaman-jery misokatra ho an’ny besinimaro. Hira telo hatreto no nesorina nanomboka ny taona 2019. Nanao antso avo izy ireo ho fanentanana sy fampatsiahivana ho amin’ny fandraisan’andraikitry ny mpanakanto amin’ny fanabeazana ny fiaraha-monina mba tsy hiaotra amin’ny mamohafady amin’ny fiaraha-monina amin’ny famoronana ny kanto.
Rasoanarimalala Jeanne no tena anarany, Rasoabakobako kosa no nahafantaran’ny maro azy teo amin’ny sehatry ny haino amanjery. Izy no mpanolotra voalohany tao amin'ny Televiziona Malagasy tany amin'ny taona 1967. Nandritra ny 25 taona dia nanafana fandaharana fanabeazana sy kolontsaina tao amin'ny Radio Nasionaly Malagasy izy. Isan'ireny ny fandaharana "Haody Rasoabakobako". 98 taona i Rasoabakobako no izao nodimandry tany Frantsa izao.Manana ny mari-boninahitra "Commandeur de l'Ordre Nationale" izy.
Avo dia avo tokoa ny tahan’ny otrikaina hita amin’ny ravin’ananambo na anamirôngo (moringa). Avo 25 heny noho ny an’ny epinara ny tahan’ny vy entiny.Avo 4 heny noho ny an’ny atody ny tahan’ny proteina ao aminy.Avo 7 heny noho ny an’ny voasary laoranjy ny vitamina C ao aminy.Avo 10 heny noho ny an’ny karaoty ny tahan’ny vitamina A ananany.Avo 15 heny noho ny an’ny akondro ny tahan’ny potasiôma ao amin’ny ravin’ananambo.Avo 17 heny noho ny an’ny ronono ny tahan’ny kalsiôma ao aminy.
Ny 4 jona 1925 i Romain Bruno Légaré no teraka tany Princeville, Faritany Québec any Canada. Misionera Katolika izy, ary mpanorina ireo sekoly Sacré-Cœur teto Madagasikara. Frère Romain no fiantso sy nahalalan’ny maro azy, indrindra teo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny fiahiana ny tanora sahirana izay antom-pisian’ny « Village de l'amitié » ao Ambatolampy.
Nanao fanambarana tao amin’ny pejiny “Zukkie Kardinnal official” i Zukkie Kardinnal, mpihira, fa “araka ny lalàna mifehy ny kolontsaina malagasy dia tsy maintsy nofafana ny hira “Sambora @ bongany”. Nandefasan’ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny serasera taratasy fampitandremana i Zukkie Kardinnal noho ny raki-tsary navoakany mikasika io hira "Sambora @ bongany” io. Efa nahazo fampitandremana tamin’ny Ministera toy izao ihany koa i Rijade tamin’ny hira sy raki-kirany “Drako hely” tamin’ny volana novambra 2019. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 22 septembre 2020 12:47
Artista: Nodimandry i Richard KAFA
Nindaosin'ny fahafatesana ny 21 septambra 2020 Randrianarisoa Richard, anisan'ny mpanorina ny tarika KAFA. Hira isany nahafantarana ny tarika ny "Mifanafatra foana". (Jereo Sary Tohiny)